Tim Cook dia miresaka momba ny fiainana manokana ao anaty horonan-tsarimihetsika vaovao | Avy amin'ny mac aho
Zatra mahita horonantsary fampiroboroboana ny Apple TV + andiany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia nalain'i Tim Cook avokoa ny toerana ambony rehetra. Raha ny marina dia ny tsiambaratelon'ny orinasa Apple no mandray azy ary tsy misy tsara kokoa manazava izany noho ny CEO an'ny orinasa tenany ihany. Ilay horonantsary mitondra ny lohateny «Privacy» Izy io dia efa hita sahady amin'ny fantsona YouTube ananan'i Apple ao amin'ny tambajotra Google.
Ao amin'ny horonantsary, i Cook dia mifantoka amin'ny finoan'i Apple fa zon'olombelona ny fiainana manokana izay miainga lalina ao anatin'ny vokatra rehetra noforoninao. Izy io koa dia manondro ny hetsika WWDC an'i Apple amin'ny 7 Jona, nandritra izany dia nanolotra fampiasa vaovao toy ny fiarovana ny fiainana manokana amin'ny mailaka sy ny tatitra momba ny tsiambaratelo momba ny fampiharana.
Amin'ny fotoana iray ao amin'ny horonan-tsary, Tim Cook dia nilaza hoe:
Ireo fisehoan-javatra manokana momba ny tsiambaratelo ireo no farany ao anatin'ny fanavaozana lava be nataon'ny ekipanay mba hanatsarana ny mangarahara sy hametrahan'ny mpampiasa fifehezana ny angon-drakitra. Ireo dia fiasa izay hanampy ny mpampiasa fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fanamafisana izany fifehezana izany sy ny fahalalahana hampiasa ny teknolojian'izy ireo nefa tsy manahy momba izay mijery mihoatra ny sorony. Ao amin'ny Apple, izahay dia manolo-tena hanome ny mpampiasa ny SAFIDY ny fomba fampiasana ny angon-drakitrao sy ny fananganana tsiambaratelo sy filaminana amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
Efa imbetsaka izahay no niresaka momba ny fahaizan'i Apple mitazona ny atin'ny fitaovany tsy ho hitan'ny masony. Fampisehoana iray ahafahan'ny olona maro mandoa mihoatra ny ilaina (raha azo atao). Tsy mahagaga raha izany rehetra izany, ny tsiambaratelo dia zo fototra izay tsy tokony holavintsika na avelantsika ho resy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tim Cook dia miresaka momba ny fiainana manokana ao anaty lahatsarinà orinasa vaovao